हेलिकोप्टर भाडामा लिएर समाजसेवी शाहीद्वारा राहत वितरण | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कुवेतमा फेरी नेपाली चलचित्र हेर्ने मौका नजिकिंदै
घाँटी हेरेर हाड निल्न धेरैले बिर्सिए.. →
हेलिकोप्टर भाडामा लिएर समाजसेवी शाहीद्वारा राहत वितरण
Posted on 04/09/2011 by डम्बर 'माइला' | टिप्पणी छोड्नुहोस्
पहिरोमा पुरिएको १६ घन्टापछि जीवितै उद्धार गरिएकी बालिका मनीषा परियारलाई राहत उपलब्ध गराउँदै समाजसेवी राजीव शाह !
१७ भदौ जाजरकोट भगवती गाविसका पहिरो पीडितलाई सामाजसेवी राजीवविक्रम शाहले राहत वितरण गरेका छन् । पहिरोमा परी आफन्त गुमाएका र घरबार विहीन परिवारलाई शाहले निजी लगानीमा हेलिकोप्टर भाडामा लिएर राहत वितरण गरेका हुन् ।
अवलगुर्ताका पहिरो पीडितलाई समाजसेवी शाहले घटनास्थलमै पुगेर शनिबार एक लाख २० हजारबराबरको राहत वितरण गरे । सो पहिरोमा परेर मृत्यु भएका देउकली दुइका बालिका परियारलाई २० हजार र घर क्षति भएका १० परिवारलाई ५ हजारका दरले नगद उपलब्ध गराएका छन् । पहिरोमा पुरिएर १६ घन्टापछि उद्धार गरिएकी बालिका मनीषा परियारको परिवारलाई पनि शाहले २० हजार नगद र कपडा वितरण गरेका छन् । अप्ठयारो अवस्थामा पनि जोखिम मोलेर उद्धारमा खटेको सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई समाजसेवी शाहले एक खसी उपलब्ध गराएको प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताए ।
भाडाको हेलिकोप्टरबाट घटनास्थलसम्म पुगेका शाहले ७० हजार रकमबराबरको चामल र एक सय १० घर परिवारलाई १ सय ५० थान कम्बल वितरणसमेत उपलब्ध गराएका छन् । जिल्लामा पहिरोबाट ठूलो क्षति भएकोले आफूले मानवीयताको नाताले सहयोग गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत लगानीमा यो सहयोग गरेको भन्दै यो ‘राहत’ नभएर ‘सहयोग’ भएको शाहले बताए । दुई वर्षअघि झाडापखाला महामारी फैलिएका वेला पनि शाहले सहयोग गरेका थिए । त्यतिवेला हेलिकोप्टर भाडामा लिएर ३० लाख बढीको औषधि वितरण गरेका थिए । लामो समयदेखि राजधानीमा बस्दै आएका जाजरकोटी राजाका सन्तान शाहले जिल्लामा विपतको वेला सबैलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् । विपत्ति परेको वेला जिल्लावासी पनि उनलाई सम्झन्छन् ।
पीडित गाउँलाई थप राहतका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले खाद्यान्नलगायत सामग्री राहतस्वरूप वितरणका लागि सिफारिस गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । राजीवबाट राहत पाएपछि खुसी भएका पीडित सरुने परियारले सरकारी आश्वासन भने पत्याउन नसकिने बताएका छन् ।
माथि लेकबाट ६ भदौमा आएको पहिरोमा परी एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १० घर पुरिएको थियो । साथै, पहिरो आसपासका ११ घर उच्चजोखिममा रहेका छन् । अवलगुर्ताका अन्य ८६ घर पनि सम्भावित पहिरोको खतरामा रहेको बताइएको छ । शनिबार नै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका ११ परिवारलाई जिल्ला रेडक्रसका मन्त्री हरिबहादुर बस्नेतले राहत सामग्री प्रदान गरे ।
पहिरोले गाउँ जोखिममा पारेपछि स्थानीयवासी छिमकी जिल्ला रुकुमको गोतामकोट गाविस वडा नं ९ को दामाचौरमा शरण लिएर बसेका छन् । पछाडि करेसामा अजंगको ढुंगा आएर अडिएपछि घर छोडेका बमबहादुर मल्लले बताए । दामाचौरमा कोही आफन्तका घरमा शरण लिएका छन् भने ४/५ घर परिवार एउटै घरमा कोच्चिएर बस्नुपरेको पीडित डिल्ली नेपालीले दुखेसो पोखे । काठपानीको पहिरो थप खस्न सक्ने खतराले अवलगुर्ता गाउँ सुनसान छ ।
This entry was posted in आँखीझ्याल, नेपाल समाचार. Bookmark the permalink.